स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी – Page2– nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
September 9, 2017 Mohan Rai 0
खजुरा (बाँके)। बाँके डुडुवा गाउँपालिका– ४ कम्दी पदमपुरस्थित शिवगायत्री विद्या विस्तार गौशाला गुरुकूल आश्रम गौशाला संकटमा परेको छ। जैविक खेतीका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन, स्थानीय जातका गाईको संरक्षण, गौमुत्रबाट औषधि बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको गौशालामा ५५ वटा गाई र बाच्छाबाच्छी >>>
September 7, 2017 Mohan Rai 0
एक युवती जब बिहे गरेर जान्छिन्, तब उनका आँखामा हजारौं सपना र चाहना रहन्छन् । जब यो सपना वास्तविकतामा पूरा नभएर चकनाचूर हुन लाग्छ निद उड्न थाल्छ । निदको कमीले गर्दा कतिबेला माया र सम्बन्ध कतिखेर गायब हुन्छ भन्ने नै >>>
पेटको वरिपरिको बोसो घटाउने हो ? यसो गर्नुहोस्
September 5, 2017 Mohan Rai 0
पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न गरोस् । पेटको वरिपरिको >>>
प्याजको बोक्राको यस्तो चमत्कारिक गुण
September 2, 2017 Mohan Rai 0
धेरैजसो मानिसहरु प्याज काट्ने बेला त्यसको बोक्रा निकालेर पछि त्यसलाई फ्याँक्ने गर्दछन् जबकी यस्तो गर्नुहुँदैन । यद्यपी, यो वास्तविकता हो कि प्याजको बोक्रा सिधै खानु हुँदैन तर तपाईं यसलाई अन्य तरिकाले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्याजको बोक्राबाट हुने केही >>>
ब्लड प्रेशर हटाउने यो मिठो फल खजुर
August 30, 2017 Mohan Rai 0
काठमाडौं । ब्लड प्रेशर आधुनिक जीवनशैलीको बीमारीका रुपमा लिइन्छ । यसलाई ‘साइलेन्ट किलर’ भन्ने गरिन्छ । मुटुको धमनीहरूमा प्रेशर बढ्न बेला अर्गन सप्लाई गर्नका लागि ज्यादा प्रेशर लगाउनु पर्छ । यसलाई नै हाई ब्लड प्रेशर भन्ने गरिन्छ । टाउको दुख्नु, >>>
मधुमेह (सुगर) रोगीले खानै पर्ने यी १० खानेकुरा
August 25, 2017 Mohan Rai 0
रगतमा चिनीको मात्रा बढि हुने भएकाले मधुमेह रोगीले जे पायो त्यहि खानेकुरा खानु हुँदैन । यो एक दीर्घ रोग भएकाले रोगीले खाना खाँदा निकै होस पुर्याएर खानुपर्छ । यसका साथै यस्ता सुगर रोगीले सिमित खानेकुराहरु नियमित र ठिक्क मात्रामा खान >>>
तौल घटाउन यसरी पिउनुपर्छ पानी
August 23, 2017 Mohan Rai 0
एजेन्सी । बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा एक–डेढ गिलास पानी पिउने । यसले वजन घटाउन मद्दत गर्नुका साथै दिमागमा प्रर्याप्त उर्जा दिन्छ । जसका कारण दिनभर सक्रीय हुन सहयोग मिल्छ । – चिया वा कफी खानुभन्दा अगाडि आधा वा एक >>>
June 19, 2017 Biswasdip 0
पछिल्ला दिनमा मानिसको व्यस्त जीवनशैली र अस्वस्थ्य खानपानका कारण मानिसमा विभिन्न खालका रोगहरु लाग्ने गरेका छन् । यस्ता रोगहरु बढ्नुमा मानिसको विलाशी जीवनशैली व्यायामको कमी आदीका कारणले मानिसमा रोग बढीरहेको छ । जसका कारण मधुमेह, हर्ट अट्याक, किड्नी सम्बन्धी रोगीको >>>
June 10, 2017 Mohan Rai 0
काठमाडौं। बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.राजेन्द्र प्रसाद बरालले नेपालमा ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेको बताए । क्यान्सर अर्थात अर्बुद रोगबारे शनिबार लायन्स क्लब अफ काठमाडौं जोरपाटीद्वारा आयोजित सचेतनामुलक कार्यक्रमलाइ सम्वोधन गर्दै डा. बरालले क्यान्सर जटील >>>